Baarlamanka Dowladda Switzerland oo u codeeyay Mamnuucidda Indha-shareerka.
Wednesday September 28, 2016 - 12:01:30 in Wararka by Super Admin
Baarlamaanka Dowladda Switzerland ayaa maalintii shalay u codeeyay in si buuxda loo mamuuco in haweenka Muslimaatka ah ee dalkaasi ku nool ay Niqaabka ku qaataan goobaha bulshada ee dadweynuhu isugu yimaadaan.
Wararku waxay sheegayaan in 88 Xildhibaan oo Baarlamaanka ka tirsan u codeeyeen in la mamnuuco indha shareerka, halka 87 Xildhibaan oo kale ay ka hor yimaadeen, halka 10 kalena ay ka aamuseen.
Ol-olaha lagu meel mariyay Mamnuucidda indha shareerka oo ay horkacayeen Xubno ka tirsan Xizbiga dadweynaha ee dalka Switzerland ee magaciisa loo soo gaabiyo "UDC” ayaa waxa uu dhaqan geli doonaa marka ay si buuxda u meel mariyaan Golaha sare ee Baarlamaanka, kaas oo ay xubno ka yihiin Gudoomiye-yaasha gobollada ee dalka Switzerland.
Xildhibaannada doonaya in xeerkani la meel mariyo ayaa waxay ku doodayaan in sharciga mamnuucista Niqaabka ay xirtaan gabdhaha Muslimaatka ah inuu ilaalinayo hiddaha iyo dhaqanka dalka Switzerland, waxay sidoo kale ku doodayaan inuu ka hortagayo waxa ay ugu yeereen xagjirnimada islaamiga ah, waxayna dalbadeen in la qaado Afti guud oo la weydiinayo dadweynaha ka hor inta aan la mamnuucin Niqaabka.
Dalka Switzerland ee kuyaalla Qaaradda Yurub ayaa horey looga ogolaa Xirashada Niqaabka marka laga reebo gobolka lagu magacaabo Tashino ee kuyaalla Koonfurta dalkaasi ee dadka dagan ay ku hadlaan Luqadda Taliyaaniga, iyadoona Afti ka dhacday gobolkaasi Sannadkii 2013-kii ay dadweynuhu diideen in indha shareerka lagu qaato goobaha ay bulshadu isugu timaado.
Dalka Switerland waxaa ku nool inkabadan 350 kun oo Muslimiin ah oo u dhiganta 4.5% guud ahaan dadka ku nool dalkaasi, iyadoo Muslimiinta Wadankaas ku nool ay badankood ka yimaadeen dalka Turkiga iyo dalkii horey loogu aqoon jiray Yugoslavia.
Sannadkii 2009kii, inkabadan 57.5% dadweynaha reer Switzerland ayaa diiday in Masaajidda kuyaalla dalkaas loo sameeyo Minaarado, waxaana dalkaasi kuyaalla inkabadan 160 Masjid oo ay leeyihiin dadka Muslimiinta ah.
Dowladaha Yurub qaarkood sida Faransiiska iyo Biljamka ayaa horey u diiday xirashada Niqaabka, waxaana taasi ay qeyb ka tahay cadaadiska xooggan ee ay la kulmaan Jaaliyadaha Muslimiinta ee ku nool Waddamada reer galbeedka.